Aprilia NA 850 Mana sy Honda NC 700 S DCT Motorcycles | Môtô Mandamina amin'ny fepetra arahana, sary, naoty, hevitra sy ny discusssions
'01 1500 FI Drifter, tsy misy pitik'afo - Kawasaki Forums (10721)
Bajaj Mpamaly 220: A Comprehensive Review Bike Blo ... (9793)
Kawasaki ZXR 750 - môtô Reviews, News & Advi ... (7131)
KTM Duke 125/200 mahazo RaceDynamics PowerTRONIC afte ... (5356)
Fampitahana Royal Enfield Classic 350 Vs Cl ... (4922)
Home → Aprilia → Aprilia NA 850 Mana sy Honda NC 700 S DCT Motorcycles
19 Jun 2015 | Author: Dima | Comments Off amin'ny Aprilia NA 850 Mana sy Honda NC 700 S DCT Motorcycles
Nahoana no clutch sy ny teknolojia mifamadika izy raha afaka manao izany? Dia lasa mandeha ho azy Motorcycles kokoa ankehitriny, fa ho ampy inona moa ilaina, izay angamba marina ny eyesore? Variator sy ny lafiny roa-clutch fifindran'ny raha oharina.
Ny be ohatry ny vao namoaka fiara ao amin'ny orinasa fiara mandao ny fiangonana andalana miaraka amin'ny fifindran'ny mandeha ho azy.
Stammtisch ny adihevitra mafana amenity ity dia manana, nandritra ny taona maro intsony, ary ny famerana ny fahafahana na ny meloka gearshift Nitaraina zara raha misy. Tsy ny mifanohitra amin'izany no mitranga. Raha oharina amin'ny boky fampianarana Mampanantena fifindran'ny mandeha ho azy ny vola aman-karena ankehitriny amin'ny fampaherezana sy mora, ary amin'ny tsara indrindra ny fampitomboana ny fihetsehana.
Ireo izay rehetra hatramin'izay nandroaka fiara manana lafiny roa amin'ny fifindran'ny clutch dia hanamafy izany Nampirisika.
Automatic môtô amin'ny môtô, na izany aza maneso, amin'ny tsara indrindra, nihaona fisalasalana amin'ny alalan'ny famerana ny manontolo "fiainana filozofia moto" dia aza voalaza. Fa raha be fisalasalana ireo ve efa nahita toy izany nandeha bisikileta sy ny fomba mahafinaritra izay asa? Honda mino, fara fahakeliny, amin'ny mitohy fironana sy ampy fitaovana VFR 1200 ary Crosstourer ihany koa ny teti-bola ambany-môtô.
NC 700 S ary X, avy ny fanampiny vidin'ny 1000 euro mandeha ho azy miaraka amin'ny fiaviana roa-clutch fifindran'ny (DCT).
Mampiahiahy io tamin'ny voalohany mitambatra ny tsara môtô mirenty miaraka amin'ny vokatra roa-toerana clutch ho anao raha tsy rehefa mijery ny Honda Integra scooter .
Izany dia mifototra amin'ny maotera iray ihany sy ny toetsika-monina sy, Mifanohitra amin 'ireo fifaninanana fotsiny fa amin'ny lafiny roa-clutch mahazatra fitaovana fifindran'ny.
The NC 700 S DCT azo ety ivelany Soa ihany fa tsy mampiseho ny môtô fifandraisana. Fa ity vaovao sy mitondra zava-baovao mifangaro tetika eo amin'ny môtô scooter sy ny tsy. Koa satria 2007, ny Aprilia Mana ao amin'ny tangoron-trano manomboka.
Ny 90-ambaratonga V2 maotera amin'ny 839 toratelo santimetatra dia avy amin'ny Gilera GP 800 scooter ary ara-teknika nahazo efa ho niova.
Ny tahan'ny fifindran'ny dia niova hatrany amin'ny alalan'ny fehikibo fiara. Atsangano fotsiny ny mandatsa-dranomaso sy hisosa hampandeha tsara manerana ny firenena. Fa tsy maintsy, na izany aza, raiso ny mahazatra-roller fingotra tarika fiantraikany eo amin'ny fividianana.
Fa Ankehitriny dia manana avo-revving 50-CC scooter teo anoloan'ny maso sy ny salohim-bary eny amin'ny ratsy, goavana.
Ny hevitra ankapobeny ny Mana Misy mihevitra amin'ny antsipiriany sy amin'ny alalan'ny
mirindra. Ny tsindry amin'ny kiboriny, ary ny Aprilia V2 miaraka, fara fahakeliny, 76 HP crankshaft fahefana hiboiboika mandeha mafy.
Ao amin'io soundscape tsy misy olona mieritreritra scooter. hita maso, ny Mana mahatonga tanteraka amin'ny Italiana finesse sy ny fihetseham-po, resy lahatra amin'ny fijerena amin'ny tsara mifantoka amin'y asa kanto sy ny endri-javatra mahavariana toy ny endri-javatra hafahafa Adjustable amin'ny alalan'ny toro-hevitra ny tongotra novakiny pedal sy ny fitaovana fanoitra.
ankapobeny, ny ergonomics amin'ny avo lenta, na dia ny lohalika zoro ara-panatanjahantena an-kolaka dia tsy tena mety ny somary avo-tsoavaly handlebars. Na izany môtô scooter no Mahafinaritra? Herim-po toy izany ny entona tonga teo, ny centrifugal clutch ka namela ny hiezaka ny hanery fanakatonana.
Mavitrika sprints mialoha Aprilia. Constant amin'ny hafainganam-pandeha foana, ny maotera accelerates ny Mana pithy sy punchy. tsy mahagaga àry raha, satria ny hafainganam-pandeha avo lenta fototra manome Torque ampy na oviana na oviana ny mialoha, izay, na izany aza, miaraka amin'ny matanjaka peo no mampihovotrovotra azy.
Nesorina ny mpiasa miasa rehetra, misy afaka hiatrika tanteraka ny tonga lafatra tsipika. Fa 229 kilao tanteraka lanja, ny Mana aina afaka mitoraka amin'ny mora raisina Jery mitongilana mitaona, avy eo, nanampy ny tsara miasa Pirelli Tires, stôika sy mafy orina ny Mihodidina.
Taorian'ny antsasak'adiny monja fiara fitiliana amin'ny alalan'ny Black Forest, ny iray dia manontany tena toy ny traditionalist motorcyclist fa tena azonao atao amin'ny asa tsy misy tena tsy azo ialana valin mba hampidiran'izy fiovana.
Na dia tsy mivantana Ultra-, fa tena andian didy amin'ny fanatanterahana ny entona Fahaizan'ny dia nandray anjara lehibe. Telo fomba mandeha ho azy (Touring, Rain, fanatanjahan-tena) misy ary tena maha samy hafa ao amin'ny hafainganam-pandeha fototra isan-karazany. Iza no te-hamaritra ny tahan'ny mihitsy, izany toy ny Honda tanana Toggle jiro na ny tongony pedal ny fantatra (manampy Honda: 250 Euro) manao.
Rehefa fito predefined Mana fitaovana ratios misy sequentially. An actuator hanova ny elanelana misy eo amin'ny Kilonga pulley. io endri-javatra, na izany aza, tsy misy olona mila, Mifanaraka ny Variator na rehefa haingana ary rehefa coasting tsara anefa ny V2 maotera.
Na dia novakiny ny maotera Torque any throttle mihidy tsara azo ampiasaina. Mijaly ny fiara fahafinaretana toy izany eo ambanin'ny fingotra tarika vokany? Tsia dia tsia.
Nanakorontana ny fifaliana ny fiara amin'ny alalan'ny fa discordant damping toetra.
Ny ambony-midina miala fork dia mafy loatra, ary ny Adjustable amin'ny lohataona sy ny Hiverina preload dona, lavitra loatra ny tsindry ambany dingana. Tao amin'ny asfalta ratsy manomboka hamporisihiko ny Mana miolakolaka araka ny tokony ho, verhagelt andalana iray miaraka amin'ny meloka fitohizan'ny. Izany no tsara tarehy ratsy tarehy.
Na izany aza downright mampidi-doza ny ABS nivezivezy amin'ny fifidianana ho an'ny mpandeha pillion. Vahao ny radiala Brembo calipers amin'ny fomba tokana rabidly teo amin'ny tany malalaka sy ela fiavy Discs amin'ny fanaraha-maso tsara intervals, ny antilock rafitra novakiny tanteraka soa aman-tsara, roa-niasa tamin'ny lehilahy iray rollover rehefa tsy misy mpamily freins-tsehatra dia saika tsy azo ihodivirana. The NC 700 S DCT be afaka tsara kokoa.
Fa ny zavatra voalohany aloha.
A Honda mpivarotra antsoina hoe ny maotera ny NC mikasika ny heriny fanaterana andro vitsy lasa izay toy ny maotera diesel Ary namely ny fantsika eo amin'ny lohany. Amin'ny ankapobeny izany dia nihoatra bisikileta amin'ny fahatsoram-po mihitsy. Fanavaozana manomboka mifindra, mahatsapa tsara.
Ergonomically ny zava-drehetra dia eo amin'ny toerana, ary koa ho an'ny dingana maharitra na inona na inona ratsy. Rehefa manomboka ny maotera, ny lalina, -lavitra hatrany fironana Parallel Twin avy hatrany manambara ny tanjona: ny pragmatisma enti sy ny frugality.
Eo ankavanana farany handlebar no misafidy iray amin'ireo fiara roa fombafomba: D ho an'ny ara-dalàna fandidiana, S ho an'ny kely sportier locomotion.
Ny fitaovana voalohany dia anjara ho azy aorian'ny fahatarana. Ny fiovana tsara ny throttle sy, Oops, ny entana tena antony mahatonga ny dingana mandroso. Ny Duel amin'ny fifamoivoizana no izy na dia eo aza 48 HP fahefana ambony indrindra ny tena fahafinaretana. Pretty mahatalanjona ny fomba fifadian-kanina ny sprint avy amin'ny eo hahomby.
Fa ivelan'ny tanàna manana ny toetra tsara ny NC. Rehefa manana ny Mana azo ampiasaina ho toy ny fitahirizana mampitohy ao amin'ny dummy fitoeran-tsoliky ny entana (ao amin'ny NC tsy mifanaraka feno face fiarovan-doha, ny Mana).
Izy koa tsara be miala chassis ny tsara noho ny Aprilia. Athletic, nefa tsy tery loatra manaporofo ny fahatairana sy ny fitrebika mahazatra. Dia mazava tsara loatra iny lalan'ny unexcited araka nahay Italiana, ary ny manageability ny Honda, noho ny ambany foiben'ny hery misintona, ary na dia eo aza ny folo kilo lanjan'ny ny fitsipika Variant ny NC 700 S mbola goavam.
Na dia teo amin'ny tehezan-tendrombohitra ambany dia mbola tapaka ny kinendry tsipika. Ary raha tokony ho diso hevitra eo anoloan'ny curve sasany, ny kapila iray manomboka mandroso soa aman-tsara indray araka ny tokony ho ary noho ny fanampian'ny mirindra ABS.
Ny boky fampianarana hery takiana dia, na izany aza, ampitahaina amin'ny avo dia avo Mana.
Ary ankehitriny dia miasa toy ny fifindran'ny clutch roa sosona? tsara, izany koa ny hazavana sy ny aloka hita. Teo ambany nampiofana ny mandeha ho azy tsy tapaka Nifandimby tena hampandeha tsara sy haingana avo.
Miankina amin'ny toerana throttle correspondingly lasa ambany na ambony kokoa ny hafainganam-pandeha.
Curvy lalan'ny amin'ny mifandimby mafy mitaky faharetana kely avy amin'izay rehetra mandeha ho azy tamin'ny mampifandray madio ny asa fanampiana sy fampiononana tombony.
Satria indraindray Switches eny avy hatrany, indrindra fa ao amin'ny D-fomba, taloha kelin'ny tsy tapaka ny curve amin'ny toerana throttle mbola niakatra ny fitaovana, ary avy eo dia ny fara tampon'ny curve rehefa entona downshift fampiharana mivantana indray.
Izany manery ny tsy mahafinaritra no mamily fanitsiana. In S maody, bends maro dia atao satria tsara kokoa ny antokony dia mitodika amin'ny ankapobeny.
Saingy azo atao eto ihany koa fa nandritra ny tsara fanahy tampoka haingana Jery mitongilana iray feno fitaovana avo, izay mahatonga fahasosorana, fara fahakeliny,. Ny mpamily dia toy izany no antsoina mba mampifanaraka ny toe-javatra ireo, na ny mifamadika ny boky maody. Indrindra rehefa eo an-toerana no nanolorana inputs mba hanararaotra izany downshift ny maotera Torque braking hatramin'ny fahenina ho fitaovana fotsiny ny 60 km / H mbola miasa mafy.
Ny farany tao an-tanàna ny rohy manelingelina ny foana, tsy ilaina ny ankamaroany toggling eo amin'ny taranja. Eto dia ny Aprilia hanitsaka kokoa aina sy matoky ny isan'ny ny fananany, indrindra fa ny namana ny nambolena fampiononana. Ao amin'ny teboka fa ny Honda mijinja ambany noho ny vola lany sy ny fikojakojana iva fanjifana solika ho an'ny fandresena.
More from ity sokajy ity
Aprilia RSV4 R APRC Foko Mechanics Motorcycles, Accessories, Apparel, Parts
Aprilia RSV4 APRC: mafy mpifaninana
Harley Davidson XR- 1200 Concept Honda DN-01 Suzuki Colleda CO Suzuki AN 650 Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 Honda X4 Low Down Moto Guzzi 1000 Daytona tsindrona Suzuki B-nitranga fahiny Final Mpanjaka Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Concept Ducati Diavel Ducati 60 môtô Honda Dream Kids Dokitto Brammo Enertia Royal Enfield Bullet 500 Classic Indian Chief Classic Honda Goldwing M1 nitranga fahiny Bike Kawasaki Four Square KTM 125 Foko Concept Smart eScooter Bajaj Discover Bike Kawasaki er-6n MV Agusta 1100 Grand Prix Suzuki B King Concept Ao amin'ny môtô Honda